Indlu Yamaplanga Enamaxesha Ayi-4 eM Marean Lake, SK - I-Airbnb
Indlu Yamaplanga Enamaxesha Ayi-4 eM Marean Lake, SK
I-Malaan Lake yiresort encinci enabantu abanobubele kakhulu kwi-East Central Saskatchewan.
Ichibi licace gca ibe zininzi ezinye iidolophu, iindawo zokudlala igalufa namachibi akufutshane. Ukuloba, ukuqubha, ukunyuka intaba nokuqhuba isikhephe zithandwa kakhulu ehlotyeni. Ebusika kukho iindlela ezilungisiweyo zokuhamba ngekhephu, ukuloba emkhenkceni kunye neendlela zokutyibilika ekhephini ezikufutshane. Kukwakhiwa umzila omtsha wokunyuka intaba oza kubonisa iindawo ezintle kuye nabani na ohamba kuyo.
Unxweme lunendawo encinci yamaxesha athile onyaka enezinto ezifunekayo nezimuncumuncu namagumbi okuhlambela kawonke-wonke, iishawa neempahla. Unxweme lunendawo yokudlala ebalungele abantwana. Kukwakho nokuqaliswa kwesikhephe ukuze uqalise ubugcisa bamanzi obukhethayo. Kukho nendlu yeeklabhu enelayisensi kwelinye icala lechibi.
Senza unakonako ukuze sibulale iintsholongwane kwindawo yakho ngenxa yeCOVID-19 kwaye sinezinto zokucoca eziphuculiweyo.
Ndiza kufumaneka ngeendlela ezahlukeneyo unyaka wonke. Ndiza kukunika inombolo yefowuni xa ndicelwa.